Vheji Yekumanikidza Yekushandisa: Iwe ikozvino wave nekodhi yako paGitLab | Linux Vakapindwa muropa
Vheji Yekumanikidza Yekushandisa: Iwe ikozvino wave nekodhi yako paGitLab
Kana iwe uchishuva nezvenyika yemitambo yemavhidhiyo, zvirokwazvo iwe unotoziva kuti chii Vheji Yekumanikidza Mudziyo. Imwe yeaya mapurojekiti anotora mazita e "pombi dzemvura" kubva kune ino inozivikanwa kambani uye kuti iwe unogona ikozvino kuongorora zvakadzama nekuti matumbo ayo (sosi kodhi) ave kuwanikwa kubva kuGitLab.
Kwenguva yakareba Valve yanga iine account yayo paGitHub, yava neMicrosoft, uye kubva ipapo kodhi yekodhi yakatumirwa kuti ishandirane pamapurojekiti akasiyana. Iyi ndiyo kesi yemapurojekiti akakosha seProton, GameNetworkingSocket, nezvimwe. Asi ikozvino, wawedzera boka remapurojekiti kuGitLab. Zviri kuchinja "mativi" here?
Zvino, mazhinji emapurojekiti arimo mu Steam mutengi weLinux watamira kuGitLab, sezvazviri nePressure Vessel. Icho chikonzero chinoita kunge chiri kujekeswa mune aya ma tweets aunogona kuona pano umo Timothee Besset anopindura svikiro inoshamisika kuti nei kufamba uku kuenda kuGitLab:
Iwo mapurojekiti aunoona paGitHub anowanzo kuvezwa kubva mukati repo. Izvo zvinotyisa uye zvinogadzira kukakavara kwemipiro yemunharaunda. Iwo mapurojekiti e gitlab ndimo matichaitira basa redu pachena.
- Timothee Besset (@TTimo) October 29, 2020
Ichi hazvizokanganisa vashandisi hapana nzira, saka hapana chikonzero chekuvhunduka kana chero chinhu chakadai. Zvese zvicharamba zvakafanana.
Kana iwe uchiri kusaziva chinonzi Pressure Vessel chii, unogona kunge usinei kana iri muGitLab kana kwete. Kuti uwane rumwe ruzivo, ndikuudze kuti iri shanduro yakareruka yeFlatpak yakagadzirirwa kunyanya yemitambo yemavhidhiyo. Saka iwe unogona kuisa mitambo mune diki yakatarwa mudziyo kubva kune Steam mutengi.
Una rubatsiro rukuru yevanogadzira vanogona kuve nemidziyo yemavhidhiyo mutambo wekuyedza, kumhanya pane chero kugoverwa kweGNU / Linux, uye bvumidza mitambo yakura ine zvimwe zvinoenderana kuti zvirambe zvichimhanya kwenguva refu mune ramangwana (semuenzaniso: yeuka kuti akawanda ma distros akasiya rutsigiro rweimwe 32-bit mapakeji nemaraibhurari).
Mamwe mashoko - Enda kune iyo GitLab repository ine Pressure Vessel
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Vheji Yekumanikidza Yekushandisa: Iwe ikozvino wave nekodhi yako paGitLab
AppImage musiki anodaidzira kurova kweWayland
RoboLinux 11: Iyo Yakanyanya Mbichana Distro Iwe Unofanira Kuziva Nezve